विश्वकै महिलामैत्री संविधान बन्ने अवसर गुम्यो : सपना प्रधान मल्ल |
प्रकाशित मिति :2015-09-23 13:42:20
नयाँ सविंधानबाट महिलाले के पाए, के गुमाए । महिला खबर डट कमले वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिकारकर्मी सपना मल्ल प्रधानसँग गरेको कुराकानी ।
नयाँ संविधानलाई महिलाको दृष्टिबाट हेर्दा कस्तो पाउनु भएको छ ?
ललितपुर,असोज ६ । लामो संक्रमणकाल अन्त्य गर्दै हामीले संविधान पाएका छौ, यो खुशीको कुरा हो । यो संविधान हिजोका संविधान भन्दा धेरै अर्थमा फरक छ, जुन महिलाका लागि पनि महत्वपूर्ण छ । संघीयता र स्वयत्तताले स्वतन्त्रताको बाटो खोल्छ । यसमा शारीरिक अखण्डताको कुरा गर्ने माहोल मिलेको छ । संविधानसभा मार्फत राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै देशमा गणतन्त्र संस्थागत गर्नु महिलाको लागि अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धि हो ।
हिजोसम्म एउटा शाह परिवारको जेठो छोरा अर्थात पुरुषमात्र यो देशको राष्ट्र प्रमुख हुनसक्ने अवस्था थियो, भने अब देशको राज्य सञ्चालनमा जुनसुकै परिवार र धर्मका महिला आउन सक्छन्, यो सकारात्मक पक्ष हो ।
धर्म निरपेक्षता हाम्रो लागि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ । धर्म र संस्कृतिको नाममा महिलामाथि हुने हिंसा र असमानतालाई जसरी मान्यता दिइन्थ्यो त्यसमाथि प्रश्न उठाउने बाटो खुलेको छ ।
लक्ष्यको किटान संविधानको प्रस्तावनाले गर्दछ । त्यसमा नेपाल कता जाँदैछ भन्ने सन्देश दिएको छ । सन्देशमा भनेको छ, नेपालमा अहिले पनि ठूलो असमानता छ । त्यो भनेकोे लैङ्गिक विभेद हो । संविधानले विभेद अन्त्य गर्ने रणनीति लिएको छ । त्यो रणनीति भनेको समानुपातिक समावेशी सहभागिताको आधारमा महिला र पुरुष बीचका असमान दुरी मेट्नु हो । राजनीति र सामाजिक अधिकार छँदैछ । त्योसँग आर्थिक, सांस्कृतिक रुपान्तरण भनेको निकै महत्पपूर्ण कुरा हो । आर्थिक रुपमा सवल भयौं भने स्वतन्त्र ढंगले हरेक क्षेत्रमा अगाडी बढ्न सक्छौ । त्यो रणनीति यो संविधानले तय गरेको छ ।
महिलाका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धीहरू यी नै हुन ?
होइन, संविधानले लिङ्गको आधारमा विभेद गर्नु दण्डनीय हो भन्नु महत्वपूर्ण उपलब्धी हो । राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभाको परिणाममै ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता यो संविधानमा परेको छ । वडामा ४० प्रतिशत भनिएको छ । राष्ट्र प्रमुखमा नभए पनि सभामुख, उप–सभामुख, प्रदेशको अध्यक्ष वा उपाध्यक्षमा एक जना महिला हुनुपर्ने जस्ता अवधारणाले महिला सहभागिता अगाडि लैजान महत्वपूर्ण संयन्त्रको रुपमा काम गरेको छ ।
यो संविधानमा अन्तरिम संविधानको भाषालाई निरन्तरता दिँदै पैतृक सम्पत्तिमा समानता, प्रजनन् स्वास्थ्यको अधिकारका विषय आएका छन् । त्यसमा थप पारिवारीक समानता भन्ने शब्द लेखिएको छ । योसँगै राज्यको हरेक संरचनामा समानुपातिक सहभागिताको सुनिश्चिता, शिक्षा रोजगारमा महिलालाई विशेष व्यवस्था गर्ने कुरा सकारात्मक रुपमा हेर्नुपर्छ ।
नीति निर्देशनको सिद्धान्तमा महिलाको घरभित्रको योगदानलाई आर्थिक मान्यता दिने, जोखिममा रहेका महिलाको संरक्षण, असहाय महिलाको लागि राज्यले स्वास्थ्य, रोजगारी, पहुँचको सुनिश्चितता, र सशक्तिकरणको कार्यक्रम ल्याएको छ । कार्यान्वयनका लागि नीति, बजेट र राज्य सञ्चालन कसरी हुनुपर्छ भनेर दिशानिर्देश गरेको छ ।
अर्को महत्वपूर्ण पक्ष महिला आयोगलाई संवैधानिक आयोगमा रुपान्तरण गरेको छ । वंशको अधिकारमा कुनै लैङ्गिक विभेद गर्ने छैन भनेको छ । संविधानले मौलिक अधिकारमा जनताका मुलभूत अधिकार के हुन भनेर किटान गर्छ र त्यसको आधारमा देश सञ्चालन हुन्छ । संविधानमा आएका सबै अधिकार जसरी पुरुषका लागि महत्वपूर्ण छन् महिलाका लागि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छन् । समान हुँदाहुँदै पनि महिलाका केही फरक आवश्यकता र अनुभूतिहरू छन् ।
संविधानमा महिलाले अधिकारको रुपमा नपाएको कुरा के हो ?
नयाँ सविधानले महिलालाई धेरै अधिकार दिएको छ । तर, राजनीतिक नेताहरूले महिलाको मूल अधिकार चुकाई दिनुभयो । अहिलेको लडाई संघीयता, जातिय र भौगोलिकता मात्र होइन, कुरा पहिचानको हो । पहिचान नागरिकतासँग जोडिएको छ । राज्यले नागरिक-नागरिक बीचमा वैवाहिकताको आधारमा विभेद नगर्ने भन्ने कुरामा सहमति भएको थियो । अहिले आएर त्यसलाई हटाइएको छ । त्यो पनि अन्तिम चरणमा आएर तीन दलको संशोधन प्रस्तावको माध्यमबाट हटाइयो ।
संविधानमा राम्रा कुरा आउँदा आउँदै महिलालाई किन पीडाको अनुभूति भयो भन्ने कुरा अभिलेखिकरण हुनुपर्छ । नागरिकतालगायतको विषयमा महिलाले नेताहरूलाई भेट्न जाँदा बारम्बार भन्नुभयो नागरिकतामा ‘वा’ ल्याएका छौं । नागरिकतामा ‘वा’ त आयो तर महिलाका लागि नभै पुरुषका लागि मात्र ल्याईयो । पुरुषको लागि ल्यायो भन्नेमा हाम्रो विरोध पटक्कै होइन । तर, महिलाको कुरा गर्दा एउटी महिलाले विवाहपछि श्रीमान विदेशी होइन भन्ने प्रमाण पेश गर्नुप-यो, त्यसपछि मेरो श्रीमान नेपाली नै हो भनेर राज्यलाई प्रमाण दिनु पर्ने भयो । प्रमाण छैन के गर्ने ? नातामा विवाद नभएको अवस्थामा समस्या आउँदैन । जहाँ विवाद हुन्छ, हिंसा भएको हुन्छ त्यहाँ नाता अस्वीकार गरेको अवस्थामा आमाले छोराछोरीलाई नागरिकता कसरी दिने ? एकल महिला छ, बुबाको पहिचान नखुलेको भनेर नागरिकतामा किन लेख्ने ?
अर्को कुरा बच्चा नेपालमै जन्मेको हुनुपर्ने भनिएको छ । विदेशमा रोजगारीका लागि गएको वा बेचबिखनमा परेर बलात्कृतबाट जन्मेको बच्चाको नागरिकता कसरी दिने ? उनीहरू बच्चा लिएर नेपाल आएपछि ती बच्चा राज्य विहीन अवस्थामा रहने व्यवस्थाको सृजना संविधानले गरेको छ ।
यदि, हामी समान हौं भने किन मेरी छोरीले विदेशीसँग विवाह गर्दा आफ्नो दम्पतिलाई नेपालको नागरिकता दिलाउन सक्दिनन् ? तर, छोराले विदेशी महिलासँग विवाह गर्छन् भने बुहारीले सजिलै नागरिकता पाउने ? यसरी हेर्दा संविधानले महिलामाथि प्रत्यक्ष रुपमा विभेद गरेको छ ।
अर्कोतिर राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक सहभागिता हो भने न्यायपालिकामा किन समावेशिता मात्र ? आयोगमा हिजो सहमति भएको भाषा समानुपातिक थियो, अहिले त्यहाँ पनि समावेशी मात्र किन लेखियो ? राजदुतहरूको नियुक्तिमा समानुपातिक समावेशी भनिएको थियो त्यो पनि हटाएर समावेशी मात्र राखिएको छ किन ?
अहिले पनि महिलालाई दोस्रो दर्जामा राख्ने र महिलापुरुष बीचको विभेदको निरन्तरता दिने पूर्वाग्रही सोचका व्यक्तिहरू मस्यौदा समितिमा देखिए । राजनीतिक निर्णय त्यहि अनुसार गरियो । त्यस्ता व्यक्ति र सोचलाई पहिचान गरि पर्दाफास गर्नु जरुरी छ । महिलाको दृष्टिले हेर्दा यो संविधान विरोधाभासपूर्ण छ ।
गणतन्त्र नेपालको संविधानले महिलालाई अहिले पनि दोस्रो दर्जाको नागरिक नै बनायो भन्न मिल्छ ?
मिल्छ । किनभन्दा म सहभागिता त तिमीलाई दिन्छु तर, मेरो राजनीतिक स्वविवेकको आधारमामात्र । तिमी मेरै नियन्त्रणमा बस्नुपर्छ । तिमीलाई पहिचानको अधिकार छैन भनेको हो नि त नागरिकताको विषयमा । सिङ्गो लक्ष्य गणतन्त्र थियो । राष्ट्रप्रमुखमा महिला हुनसक्ने अवस्थाको सृजना गरेको थियो । धर्मको आधारमा हुने हिंसाको अन्त्यसँग धर्म निरपेक्षताको अवधारणा अगाडी लैजानुपर्छ भन्यो । समावेशी र लोकतन्त्रको कुरा ग-यौं ।
संघीयताको कुरा आयो । संघीयता भनेको शक्तिको विभाजन पनि हो । यसमा महिलाको स्वायत्तताको पनि सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा पनि हो । अहिले पनि महिला अधिकारको कुरा गर्दा धेरै मौलिक अधिकार त दिएको छ । तर, सबै कानुन बनाएर लागु गर्ने भनेको छ । नेपालको अहिलेसम्मको अभ्यास कानुन नभएकोले अदालतले त्यसलाई अवैधानिक घोषणा गर्दछ ।
यदि कानुन बनेन भने के गर्ने ? हामीले खोजेको संविधान पढ्न पाउने मात्र होइन, जीवन व्यवहारमा लागू गर्न र भोग्न पाउने पनि हो । यसमा कानुन बनाएर मात्र पनि हुँदैन । संरचना, राज्यले गर्ने बजेट विनियोजन र नियुक्तिहरू कति संवेदनशील ढंगले गर्छ भन्नेमा भर पर्छ । नियुक्तिको प्रक्रियामा सक्षमतामा भन्दा राजनीतिक भागबण्डामा हुन्छ । त्यसले स्वतन्त्रता र स्वायत्तताको सोचलाई बन्द गरिदिन्छ । त्यहाँ राजनीतिक स्वार्थको मात्र कुरा हुन्छ । त्यहाँ राज्य र महिलाका मुद्दा ओझेलमा पर्ने सम्भावना बढेर जान्छ ।
त्यसो भए यो संविधानबाट नेपाली महिला धेरै खुशी हुने अवस्था छैन ?
खुशी हुने ठाउँ पनि छ । यहाँ कुरा कार्यान्वयनको हो । अब सकारात्मक कुरालाई कसरी कार्यान्वयन गर्दछ भनेर हेर्नुपर्छ । दुःखी यस अर्थमा बनायो कि महिलाले शान्तिपूर्ण तरिकाले आफ्ना आवाज उठाउँदा उठाउँदै पनि उनीहरूको आन्दोलन हिंसात्मक नभएको हुनाले दवाव महशुस गरिएन ।
महिलाको विषयलाई राजनीतिक मान्यता दिएन । हामीले धेरै केही खोजेका थिएनौं, हाम्रा मुख्य माग भनेका जम्मा दुइटा मात्र थिए । एउटा नागरिकतामा समानता, अर्को स्थानिय निकायको पदाधिकारीको अध्यक्ष वा उपाध्यक्षमा एक जना महिला हुनुपर्ने । यी दुइटा मुद्दालाई समाधान गरिदिएको भए, नेपालले एउटा यस्तो अवसर पाएको थियो, विश्वमै महिलामैत्री संविधान भनेर स्थापित हुन्थ्यो ।
आन्दोलनबाट नपाएको कुरा तत्काल संशोधन गरेर ल्याउन सकिन्छ भन्ने नेताको कुरामा कत्तिको विश्वास गर्न सकिन्छ ?
संविधान भनेको जिवन्त दस्तावेज हो भन्दाभन्दै पनि हाम्रा अभ्यासहरू हेर्दा त्यो खालका देखिँदैन । हरेक पटक हुने परिवर्तनसँगै नयाँ संविधान बनायौं तर, संविधान परिपक्व बनाउन सकेनौं । अर्को कुरा राजनीति नेताले चाहे भने अहिले पनि अवसर छ, तर त्यो देखिँदैन ।
आन्दोलन गर्ने मधेशीलाई वार्ता गर्न बोलाएको छ, महिलालाई बोलाएको छैन् ।
यो संविधानमा सहमति भएका महिलाका अधिकार षडयन्त्रमूलक ढंगले कटौती गरिएको छ । त्यो पनि राजनीतिक दलका नेताले संशोधन प्रस्तावबाट हटाएका छन् । मौलिक अधिकारमा परिवारको अधिकार र समान आर्थिक लाभका कुरा कटौती गरे । हिजोसम्म दुईवर्षमा कानुन बनाउनुपर्छ भन्ने थियो त्यो पनि काटे ।
पैतृक सम्पति र नागरिकताको विभेदलाई निरन्तरता दिने वतावतरण यो संविधानले गराई दिएको छ । त्यसकारण अब पनि उहाँहरूले महिलाको कुरा सुन्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छैन् । राजनीति र महिलाको बीचमा दुरी कसले सृजना गरेको छ । यसरी दुरी बढ्नु ठिक हुँदैन ।
उत्पीडित जाति वर्गले कुरा अधिकारको कुरा गर्दा जहिले पनि ‘मधेशको आन्दोलनमा बाहिरी चलखेल भो,’ ‘महिला पश्चिमा संस्कृतिबाट प्रभावित भएर डलरको खेती गरिरहेका छन्’ भनियो ।
तपाई हाम्रो आवाज र आवश्यकतालाई कति असंम्वेदनशील तरीकाले हेरिन्छ भन्ने यो एउटा उदाहरण हो । मानौं उहाँहरूको आमा र छोरी छैनन् र हामीमा राजनीतिक ज्ञान नै छैन । त्यसबाट उहाँहरू बाहिर आउनुपर्छ । यदि महिला पनि राजनीतिक शक्तिको रुपमा उदय भए भने दुर्गा र भगवतीको रुप लेला नि ?
संविधान कार्यन्वयनका चुनौतिहरू के देख्नु भएको छ ?
यो संविधानको चुनौती भनेको संविधानमा उल्लेखित धाराहरू एक अर्कासँग बाझिएका छन् । शव्दहरू बहुअर्थ लाग्ने खालका छन्, यो एउटा चूनौतिका रुपमा मैले देखेकी छु । एकातिर हिंसाविरुद्धको अधिकार, अर्कोतिर धर्म र संस्कृतिको नाममा विभेद गर्न नपाउने ।
अर्को, धर्म निरपेक्ष भनेको सनातनदेखि चलि आएको धर्मको संरक्षण र संस्कृतिको संरक्षण भन्यो भने त्यसविचको द्वन्द्वलाई कसरी हेर्ने ? दोस्रो संविधानसभामा केही मानिसको नियत ठिक थिएन । यसमा महिलाको क्षेत्रमा काम गर्ने मिडियाले लैङ्गिक हिसावले धेरै उठाउनुपर्छ ।
हामीले सबै कुराको परिर्वतन एकै पटक खोज्यौं । विशेष गरी राज्य पुर्नरसंरचनाका नयाँ सोचहरूलाई नयाँ संविधान मार्फत रुपान्तरण गर्न खोजियो । यो आफैँमा चुनौतिपूर्ण कुरा हो । विविधताले भरिएको हाम्रो समाजमा रहेका धेरै राजनीतिक पार्टीले बाँडेका धेरै आकांक्षाहरू छन् ।
नयाँ संविधानमा रहेका विभेदकारी नीति र व्यवस्थालाई हटाउनको लागि महिलाको अबको कार्यनीति के हुनुपर्छ ?
राजनीतिक पार्टीको निर्णायक तहमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता आवश्यक छ । त्यसैगरी महिला पनि चेतनशील हुन आवश्यक छ ।
सिङ्गो महिलाको प्रतिनिधित्व गर्नेले महिलाको आवश्यकता के हो ? बुझ्नु पर्छ । यदि आफ्नो ठाउँमा महिला अधिकारको कुरालाई बलियो गरी उठाउन सकिँदैन भने अन्य कुरालाई तपाईले कसरी उठाउन सक्नुहुन्छ ?
नीति निर्माण तहमा बसेर न त राजनीतिक मुद्दा उठाउन सक्ने, न त आर्थिक सामाजिक रुपमान्तरणका मुद्दा उठाउन सक्ने ? न त महिलाका मुद्दा उठाउन सक्ने ? त्यो भएर प्रतिनिधिले के कुरा उठाउने त ? त्यो हो भने आर्थिक सामाजिक रुपमान्तरणको मुद्दा पनि महिलाको मुख्य मुद्दा हो । खै त बलियोसँग उठाएको ? कस्ले के भन्यो भन्दा पनि हामी महिला हिंसा अन्त्यको लागि लडार्इं लडिरहेका छौ, त्यो जारी रहन्छ ।
त्यसो भए महिलाका मुद्दालाई कसरी एकीकृत गरेर लैजान सकिन्छ ?
महिला प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर राजनेताको रुपमा अगाडी जानुहुन्छ त्यो बेला महत्व बुझ्नु हुन्छ होला । महिला भोटरहरू पनि राजनीतिक क्षेत्रमा सक्रिय भएर अगाडी आउन आवश्यक छ । हामी महिलाको कमजोरी के हो भने राजनीतिक नेताहरू कति जनालाई बुझाउने प्रयास गरौं ? अहिले राजनीति पार्टीभित्र महिलाको बारेमा छलफल भएको देखिँदैन । उनीहरूलाई हामीले राजनीतिक शक्तिका रुपमा बुझेनौँ । अबको निर्वाचन वा अवका आन्दोलनमा महिलाले हाम्रो लागि के ग-यो भन्ने प्रश्न ती मान्छेहरूलाई सोध्नुपर्छ । एकताबद्ध भएर समानताको लागि लड्ने नै हो ।